“ထိုင်ဝမ်ကတ်” ကစားနေခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် အမေရိကန်အား တရုတ် တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံကို ဆန့်ကျင်သောအင်အားစုများ၏ လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ် မပြုမူရန်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း “ထိုင်ဝမ်ကတ်” ဖြင့် ကစားခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် တရုတ်နိုင်ငံက တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝမ်းဝန်ပင်းက ဇန်နဝါရီ၁၀ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် KatherineTai ၏ ပြောကြားချက်အပေါ် မှတ်ချက်ပြုပေးရန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့ရာ ဝမ်းက အထက်ပါအတိုင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျမှုကို ဖော်ဆောင်ထားသော သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်ခြင်းနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းအပြည့်အဝရှိသည့် “အကျပ်ကိုင်မှု” အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိန်းသိမ်းရန် တရားနည်းလမ်းကျဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် လိုရာဆွဲလျက် မမှန်မကန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းက ဆိုသည်။
“ဒါဟာမီးကုန်ယမ်းကုန်ခြိမ်းခြောက်အကျပ်ကိုင်တဲ့သံတမန်ရေးရာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံသည်တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ထူထောင်ထားသောသံတမန်ဆက်ဆံရေး၌ နိုင်ငံရေးကတိကဝတ်အား ဖောက်ဖျက်ခြင်းနှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် “တရုတ်နိုင်ငံတစ်ခု၊ ထိုင်ဝမ်တစ်ခု” ဟူသော မှားယွင်းသည့်သဘောထားကို ဖန်တီးခဲ့သည်ဆိုသောအချက်မှာ ရှင်းလင်းကြောင်းဝမ်းက အလေးထားပြောခဲ့သည်။
“လစ်သူယေးနီးယားမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွင်းသဘောမှာလည်းဒါကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လျက်ရှိပါတယ်”ဟု၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒ လျော့ပါးစေရန် လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ အာဏာပိုင်များအား အစပိုင်း၌ လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ၎င်းတို့အား ပံ့ပိုးခြင်း၊ ကူညီခြင်းနှင့် အားပေးကူညီခဲ့ကြောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် လစ်သူယေးနီးယား၏ အကျိုးစီးပွားများကို အဆုံးရှုံးခံလျက် တရုတ်နိုင်ငံကို ထိန်းချုပ်ရန် ထိုင်ဝမ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေး တွက်ချက်မှုရှာဖွေရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ဝမ်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ အမှားကို အမှန်ပြင်ပြီး တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး အင်အားစုတွေရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ် မပြုမူဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်တွေအနေနဲ့လည်း ထိုင်ဝမ်ကတ်နဲ့ ကစားခြင်းဟာ အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်းခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လောင်ကျွမ်းခြင်းသာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ် ” ဟု ဝမ်းက ဆိုသည်။
China urges U.S. to stop playing “Taiwan card”
BEIJING, Jan. 10 (Xinhua) — China has urged Lithuania not to act asapawn for anti-China forces and urged the United States to stop playing the “Taiwan card”, Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin said here Monday.
Wang made the remarks atadaily press briefing when asked to comment U.S. Trade Representative Katherine Tai’s remarks concerning China.
The United States distorted China’s legitimate measures to safeguard its national sovereignty as “coercion”, which has fully exposed the hypocrisy and deception of U.S. discourse bullying, Wang said.
“This is flat-out ‘blackmail diplomacy’,” he said.
Wang stressed that the fact is clear that Lithuania violated its political commitment it had made upon the establishment of diplomatic ties with China, and created the false impression of “one China, one Taiwan” in the world. “People of insight in Lithuania have also criticized this,” he added.
The United States instigated the Lithuanian authorities to undermine the one-China principle from the outset and then supported, aided and abetted them, Wang said, adding that the United States tries to seek political calculation aimed at using Taiwan to contain China at the expense of Lithuania’s interests.
“We urge the Lithuanian side to correct its mistakes and not act asapawn for anti-China forces. We also warn the U.S. side that playing the ‘Taiwan card’ is counterproductive and will get itself burnt,” Wang said. ■
Photo : Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin speaks atapress briefing in Beijing, Aug. 4, 2020. (Photo from Foreign Ministry website)